जीर्ण बन्दै गोदावरी काठे पुल ! – सुदूरखबर डटकम
जीर्ण बन्दै गोदावरी काठे पुल !
अत्तरिया, साउन-२८ । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको गोदावरी धाममा धार्मिक तथा मनोरञ्जन गर्ने पर्यटकहरुको घुईचो रहेको देखिन्छ । अत्तरिया चोक बाट उत्तरपट्टी ७-८ किलोमिटरको दुरीमा रहेको गोदावरी धाममा अहिले आन्तरिक तथा बाह्य प्रर्यटकहरु आउने जाने क्रम दिनानु दिन चल्दै आएको देखिन्छ ।
धार्मिक प्रर्यटकहरुका लागि बन्देबी मन्दिर, गोदावरी धाम कुम्भ स्थान परिसरमा रहेका अनेकन भगवानका मुर्तीमा पुजा-आजा गर्ने हरु देखिने गर्दछन । साथै ३०-४० बर्ष पहिले भिमदत्त राजमार्गको पहाडी जोड्ने पुलको रुपमा रहेको गोदावरी काठे पुल अहिले जिर्ण अबस्थामा रहेको छ । लामो समय पछी पुल लाई संरक्षण समर्बन बिना पुलको संरचना कमजोर बन्दै गएपछी अहिले स्थानिय जनता, आन्तरिक तथा बाह्य प्रर्यटकलाई समस्या देखिएको छ ।
पछिल्लो समयमा गोदावरीको काठेपुल पर्यटकहरुका लागि आक्रसक केन्द्र बिन्दु बन्दै गईरहेको देखिन्छ । समयमै स्थानिय सरकारले जिर्ण बनेको पुलको पुनर निर्माणमा ध्यान दिएमा भावी पिडीका लागि अबलोकन भ्रमण एव मनोरञ्जनपूर्ण स्थलको रुपमा चिन्न सकिने थियो ।
यस काठे पुललाई ब्यवस्थित गरेको खण्डमा आगामी दिनहरुमा यस क्षेत्रलाई चिनाउने गोदावरी धाम सँगै रहेको पिकनिक स्पोर्टका लागि समेत टेवा पुग्ने देखीन्छ । यस क्षेत्रमा बिदाको समय पारी पिकनिक मनाउने/रमाउने हरु अत्तरिया, धनगढी बाहेक कञ्चनपुरबाट समेत आउने गर्दछन । पिकनिकको लागि सफा पानीको ब्यवस्था नभए पनि खोलाकै पानी प्रयोग गरेर भए पनि बनभोजमा रमाउने गर्दछन ।
यस क्षेत्रलाई प्रदेशसरकारबाट प्रदेश सदरमुकामको प्रस्ताव ल्याएपनि अहिले सम्म कुनै संरचना बनेको देखिदैन, संरचनाका लागि छुट्याएको करोडौ बजेट समेत यसपाली फ्रिज गएको देखीन्छ । राजनितिक एजेन्डाको रुपमा बिभिन्न पाटीका प्रतिनिधीले गोदावरी क्षेत्रको विकासका लागि धेरै बोले पनि बोलेका ती शब्द बोलीमै सिमित देखिन्छन ।
यस क्षेत्रको विकासका लागि स्थानिय सरकारले समयमै ध्यान दिएको खण्डमा गोदावरी नगरपालिकाको आय आर्जनको स्रोत मात्र नभएर धार्मिक सांस्कृतिक रुपमा देश बिदेशमा चिनाएमा पर्यटन ब्यावसाय फस्टाउने एव स्थानिय बासी स्वोरोजगार हुने सम्भावना बोकेको देखिन्छ ।